China Sodium Bicarbonate Ukwenziwa kunye nefektri | Isihloko
Amagama esithetha-ntonye: Ukubhaka isoda, isodium Bicarbonate, isodiyam acid carbonate
Ifomula yemichiza: NaHCO₃
Ubunzima beMloecular: 84.01
Indawo yokunyibilika: 270 ℃
Indawo yokubilisa: 851 ℃
Ukunyibilika: Unyibilika emanzini, awunanyibilika kwi-ethanol
Ubunzima: 2.16 g / cm
Inkangeleko: mhlophe yikristale, okanye opacity monoclinic yikristale
I-crystal emhlophe, okanye i-crystal e-monoclinic ecwecwe ecwebezelayo, engenavumba, enetyuwa, enyibilikayo emanzini, engenakunyibilika kwi-ethanol. Ubunyibilikisi emanzini yi-7.8g (18℃) kunye ne-16.0g (60℃).
Kuzinzile kubushushu obuqhelekileyo kwaye kulula ukubola xa ushushu. Ibola ngokukhawuleza kwi-50℃ kwaye ilahlekelwe ngokupheleleyo yi-carbon dioxide ngama-270℃. Akukho tshintsho kumoya owomileyo kwaye ngokuthe ngcembe iyabola kumoya ofumileyo, inokusabela kuzo zombini iiasidi kunye neziseko. Iphendula ngeeasidi ukwenza iityuwa ezingqinelanayo, amanzi kunye nekhabhoniyokhusayidi, kwaye iphendule ngeziseko ukwenza iicarbonates ezihambelanayo kunye namanzi, Ukongeza, inokuphendula ngeetyiwa ezithile kwaye iphindwe kabini i-hydrolysis ene-aluminium chloride kunye ne-aluminium chlorate ukuvelisa i-aluminium hayidroksayidi, iityuwa zesodiyam. kunye nekhabhon diokside.
UMXHOLO (NjengoNaHCO3 %)
ISIQINISEKISO ESININZI (PB%)
1）Isigaba segesi sekhabhoni
Isisombululo se-sodium carbonate senziwe nge-carbon dioxide kwi-carbonization tower, emva koko yahlulwe, yomile kwaye ityunyuzwe, kwaye imveliso egqityiweyo ifunyenwe.
N / A₂CO₃+ CO₂(g) + H₂O→2NaHCO₃
2)Isigaba segesi esiqinileyo
I-carbonate ye-sodium ibekwe kwindawo yokulala, ixutywe namanzi, ikhuphe i-carbon dioxide ephuma emazantsi, yomile kwaye ityunyuzwe emva kokufakwa kwekhabhoni, kwaye imveliso egqityiweyo ifunyenwe.
N / A₂CO₃+ CO₂+ H₂O→2NaHCO₃
1, icandelo Pharmaceutical
Isodium bicarbonate inokusetyenziswa ngokuthe ngqo njengemveliso eluhlaza kwimveliso yamayeza ukunyanga ukugcwala kwe-asidi esiswini; Isetyenziswa njengezinto zokulungiselela iasidi.
2) Ukulungiswa kokutya
Ekusetyenzisweni kokutya, yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu zokukhulula, ezisetyenziselwa ukuvelisa iibhiskithi, isonka njalo njalo, yicarbon dioxide kwiziselo ezinesoda; Inokudityaniswa ne-alum ye-alkaline baking powder, kwaye inokudityaniswa nesoda soda yesoda ye-caustic. Ingasetyenziswa njengokubulala ibhotolo.
3) Izixhobo zomlilo
Isetyenziswe kwimveliso yesicimi-mlilo se-asidi kunye nealkali kunye nesitshizi sokucima umlilo.
4) Ishishini ngerabha ingasetyenziselwa irabha, imveliso isiponji;
I-5) imboni ye-Metallurgical ingasetyenziselwa ukuhamba kwe-ingots zensimbi;
6) kushishino ngoomatshini ingasetyenziswa intsimbi uphose (Foundry) isanti yokubumba abancedisayo;
7) Ishishini lokuprinta kunye nokudaya linokusetyenziswa njenge-arhente yokulungisa idayi, i-asidi kunye ne-alkali buffer, ukudaya amalaphu kunye nokugqitywa kwe-arhente yonyango ngasemva;
8) Umzi mveliso wempahla eyolukiweyo, isoda yokubhaka iyongezwa kwinkqubo yokudaya ukuthintela umphanda womsonto ekuveliseni iintyatyambo zombala.
9) KwezolimoIngasetyenziswa njengesicocisi soboya kunye nokufunxa imbewu.
Uneminyaka engaphezu kwe-15 yamava obuchule kwimveliso yeSodium Bicarbonate;
ngenxa yokusondela kwizibuko, qinisekisa amaxabiso okhuphiswano
Imiba efuna ingqalelo
Kucetyiswa ukuba abasebenzi bexesha likaxakeka banxibe imaski yothuli (ikhava epheleleyo) kwaye banxibe iimpahla zomsebenzi ngokubanzi. Thintela uthuli, tshayela ngononophelo, faka iingxowa kwaye udlulisele kwindawo ekhuselekileyo. Ukuba kukho isixa esikhulu sokuvuza, gubungela ngeeplastiki kunye ne-canvas Qokelela, phinda usebenzise kwakhona okanye uthuthele kwindawo yokulahla inkunkuma.
Isodium bicarbonate yeyempahla engenabungozi, kodwa kufuneka ithintelwe ukufuma. Isoda yokubhaka akufuneki ixutywe nezinto eziyityhefu ukuthintela ungcoliseko.
Egqithileyo Isoda Ash
Okulandelayo: Isodium Metabisulphite
Thenga iSodium Carbonate
Ixabiso leSodium Carbonate
IHydrosulfite, Isisombululo seCalcium Bromide, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Ulwelo lweCalcium Bromide, IHydrosulfite De Sodium,